I-QIT600F2 Ukubhala ithebulethi esebenzisanayo
QD3900H1 Ikhamera yedokhumenti yombhede oflethisiwe
Ikhamera Yedokhumenti Yedeskithophu yeQomo QD3900H2
Ikhamera yedokhumenti ye-USB ye-QPC20F1
Ikhamera yedokhumenti ye-QPC28 engenantambo
Isibonisi sedokhumenti ye-QPC80H2 Gooseneck
I-Qomo Audience Response System eyenziwe e-China
Uhlelo Lwempendulo Yempendulo ye-QRF888
I-QRF997 Response System enezwi lokuqaphela
I-QRF999 Uhlelo Lokuphendula Izithameli
Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo le-QWB300-Z
Amaphaneli e-BundleBoard asebenzisanayo
Isikrini sokuthinta i-QIT600F3 capacitive
I-Multifunctional Wireless Qpen
I-QPT200 Smart Pen Tray
I-QIT600 F2 iyiqapha yakamuva nenkulu kunazo zonke esebenzisana nesikrini esibanzi se-QOMO. Sebenzisa le podium entsha nethuthukisiwe yedeskithophu ukuze ulawule inkulumo yakho noma isethulo ngaphandle kokufulathela izethameli zakho. Kubuso bekhompuyutha yakho, iyithebulethi enamandla enesibonisi esikhulu, esikhanyayo, nesisabela ngendlela emangalisayo.
Qaphela: Sisekela uhlobo lwe-Qomo lwedemo ngenkathi ekukhiqizweni ngobuningi singamukela i-OEM/ODM
Amandla engeziwe esibayeni sakho
Yenza izichasiselo kunoma yini ngokubhala ngesandla okulingisa okushesha kakhulu nokushelelayo. Thatha amanothi, dweba, futhi udale njengoba ubungenza encwadini yakho yokubhalela oyintandokazi.
Ungabhala ngepeni ngezinhlobo ezahlukene zemigqa bese uchofoza ipeni ukuze ube irabha ukuze ususe umbono wephutha.
Izibonisi zepeni zokudala ze-Qomo zizokusiza ujabulele ulwazi lokusebenza ngqo esikrinini ngepeni lethu elizwela ukucindezela.
Idizayinelwe ukuthi ibe lula futhi ikhululeke
Lungisa i-QIT600 F2 noma yikuphi phakathi kuka-12° no-130°—noma yikuphi okuzwa kahle. Futhi akudingeki ukhathazeke ngokuphazamiseka lapho ubeka izandla zakho esikrinini ngenkathi ubhala noma udweba.
Hlala uxhumekile nezithameli zakho
Xhuma i-PC usebenzisa okokufaka kwe-HDMI, futhi ukhiphe kuprojektha noma isikrini esikhulu. Ungakwazi ukulawula yonke into ebonwa izethameli zakho usebenzisa idivayisi eyodwa, ngaphandle kokuthi ubheke ngemuva kwakho noma ucashe ngemuva kwesikrini sekhompyutha.
I-intshi engu-21.5 egcwele ilayini(Usayizi wesikrini osebenzayo: 478.64(H) X 270.11(V)) Isibonisi Sepeni se-IPS:
Ngobuchwepheshe bakamuva obune-laminated egcwele futhi ifakwe iphaneli yengilazi evikela ukukhanya, yehlisa kahle umuzwa ocwebezelayo futhi cishe akukho offset, vikela amehlo akho lapho ujabulele ukudweba.
I-engeli yokubuka ebanzi engu-178° nesibonisi sombala esingu-16.7M sikusiza ukuthi upende ngokunembile yonke imininingwane yomsebenzi wakho wobuciko.
Isixazululo esingu-1920*1080 ukubonakala okucacile kanye nombala wezikhundla wangempela nocacile kukunikeza umhlaba obonakalayo wangempela
Inamandla futhi iyahambisana
Kokubili amawindi kanye nesistimu ye-android iyahambisana
ukufanisa isofthiwe yokudweba ye-PS, AI, AE Etc. ngokuphelele
Imininingwane yokupakisha ithebhulethi yokubhala ipeni yedijithali
Indlela yokupakisha ejwayelekile: 2 ama-pcs/ibhokisi
Isisindo esiphelele: 15.6 kgs
Usayizi wokupakisha: 600 * 345 * 510mm
Olandelayo: Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo le-QWB300-Z
Okwedlule: I-Qomo Interactive Flat Panel enokulungiswa okuphezulu kwe-4K
I-QIT600F2 Ukubhala imininingwane esheshayo yethebhulethi
I-QOMO QIT600F2 Incwadi Yomsebenzisi_1.1
Incwajana Yethebulethi Yokubhala ye-QIT600 F2